musha Europe Vatambi Vanotamba Rafael Nadal Childhood Nhau Plus Untold Biography Facts
CB inopa Nhoroondo Yese yeTennis Genius iyo inozivikanwa zvikuru se “Mambo wevhu”. Yedu Rafael Nadal Childhood Nhau pamwe neS Untold Biography Chokwadi inounza kwauri nhoroondo yakazara yeakajeka zviitiko kubva paudiki hwake nguva kusvika zvino.
Kuongororwa kwaRafael Nadal Biography kunosanganisira nyaya yehupenyu hwake pamberi pemukurumbira, hupenyu hwemhuri, vabereki, mararamiro, hupenyu hwehupenyu, mambure akakosha uye akawanda asiri-echokwadi nezvake.
Ehe, munhu wese anoziva nezve kutonga kwake uye mutambo unonakidza pamatare evhu. Nekudaro, vashoma chete ndivo vanofunga Rafael Nadal's Bio iyo inonakidza kwazvo. Iye zvino pasina imwezve ado, ngatitangei.
Rafael Nadal Childhood Nhau - Hupenyu hwepakutanga uye Nhoroondo Yemhuri:
Rafael Nadal akazvarwa pazuva re3rd raJune 1986 kuManacor muBalearic Islands, Spain. Akazvarwa kuna baba vake Sebastián Nadal - muzvinabhizinesi ane zvido muInishuwarenzi, Kugadzira uye Eateries- (inoratidzwa pazasi naamai vaRafael). Amai vake, María Parera aive mutengesi uyo akatengesa zvinonhuwira panguva yekuzvarwa kwake.
Kukura muSpanish Guta reManacor, mudiki Nadal haana kungonakidzwa nekambani ine rudo yevabereki vake asi yemhuri yake yakakura iyo inosanganisira vanasekuru vake vemitambo, Miguel Angel (mutambi wenhabvu uye mukoma kuna amai vaRafael) pamwe naAntonio “ Tony ”Nadal (mudzidzisi wetennis uye mukoma kuna baba vaRafael).
Vose Abamunun'una vaiva nesimba guru kuna Rafael huduku uye maitiro avo emitambo yakabatwa paNadal wechidiki uyo pasina nguva akaziva Football neTennis.
Ivo zvakare vakabatsira kuona kuti Muzukuru wavo aive nehudiki husingakanganwike nekutora zviitiko zvekuvaraidza zvinosanganisira kubata hove sababa vaNadal vakateerera mabhizinesi ake ari kukura apo amai vake vaive vakatarisana nekuchengeta Rafael uye zvaidiwa neimba yehanzvadzi yake.
Rafael Nadal Childhood Nhau uye Chokwadi - Basa Rekuvaka:
Apo Rafael akanga ava namakore mana, babamunini vake Tony vakamupa rukanda rwakanga rwakagadzirirwa muviri wake usina simba uye yakaita mavara ake aidiwa. Akanyengerwa nechipo, Rafael zvishoma nezvishoma akatarisa Tennis sababamunini Tony akanyora chirongwa chakasimba asi chinonakidza chaizomuona achikudziridza muviri wemutambi.
Kunyange zvazvo Rafael Nadal akaparadzanisa simba pakati pebhola neTennis, zvikoro zvake kuchikoro zvakanga zvisiri kuwana zviri nani, ruzivo rwakanga rwuri kunetseka kune zvaakaita baba vake bhizinesi.
Pakati pemhinduro dzakawanda, Sebastián akaitwa kuti ave nechokwadi chekuti mwanakomana wake anokwidza manera eChikoro aibvunza Rafel kuti atarise pamutambo mumwe chete. Iyo jaya rakasarudza Teniss uye nekukasira kumberi kufambidzana ine zvese zvekufara nezvesarudzo yake.
Rafael Nadal Biography - Kumuka Mukurumbira Nhau:
Mushure memakore ekudzidziswa kwakasimba kwakatariswa nababamunini vake uye murairidzi Tony, Rafael (asati ave kuyaruka) akavandudza hunyanzvi hwekutamba hunoratidzirwa nekukurumidza kufamba mumatare pamwe nekugona kwekushandisa ruoko rwake rweruboshwe kuita kurova ruoko rwemberi.
Pazera ra 12, Rafael akabatanidza unyanzvi hwake hwekuwana mukukunda mazita echiSpanish neEurope mazita echikwata chake (makore 4 mushure mekunge atora unyanzvi hwepasi pe-12 tennis championship).
Magamba ake haana kuzivikanwa neSpanish Tennis Federation iyo yakakumbira kuti Rafael Moves kuBarcelona nechinangwa chedzidzo yepamusoro. Chikumbiro hachina kudzika zvakanaka nevabereki vaRafael vaitya kuti mwanakomana wavo anogona kutsauswa kubva pazvidzidzo.
Mukuwedzera, vaitenda kudzidziswa kunogona kuwanikwa chero kupi zvako uye kwete nzvimbo chaiyo, nharo yababamunini Tony yakasimbiswa nekucherechedza kuti:
“Ini handidi kutenda kuti unofanirwa kuenda kuAmerica, kana kune dzimwe nzvimbo kuti uve mutambi akanaka. Unogona kuzviita uri kumba kwako. ”
Pfungwa yaasekuru Tony yakajekeswa nezviitiko zvakaitika mushure mekunge Rafael aita hunyanzvi hwake pa15, (inoratidzwa pazasi) kuzviita kuma semi fainari ewimbledon junior mutambo pazera re16 mushure maizvozvo akunda kukunda kweNational Tennis timu yeSpain. paDavis Cup paakanga akura 18.
Kutora chikamu kwakatevera muWorld Tournaments kwakaona Nadal achihwina mikombe yakawanda, achikwira nemumapoka uye ndokuva anopikisa anotyisa kumatarenda etenisi anosanganisira Guillermo Corio, Juan Carlos Ferrero na Roger Federer kukwikwidzana naRafael kunoita kunge kusingagumi. Vamwe vese, sezvavanotaura, inhoroondo.
Rafael Nadal Rudo Hupenyu:
Rafael Nadal anga ari muhukama nemusikana wake Xisca Perello - akazvarwa Maria Francisca Perello, kwenguva yakareba kwazvo.
Ivo vaviri vakanzi vaizivana makore mashoma vasati vatanga kufambidzana mu2015. Ivo vachiri zvakadaro kuzivisa pachena kubatanidzwa kana zvirongwa zvekuroora.
I30 ane makore ane zana Xisca ndiye mushandi wehushuwarisi uye bhizinesi kupedza. Anorarama hupenyu hwehupenyu hwega uye akasarudza kurega mitambo yose yemagariro evanhu, kusarudza kuisa simba rake rose nekucherechedza paukama hwake, basa uye zvimwe zvinokonzera zvipo.
Xisca inoshumirawo semutungamiri wepurojekiti yeRafa Nadal Foundation, sangano rekuratidza tennis nyanzvi yakatanga makore ane gumi apfuura.
Rafael Akambobvunzwa kuti chii chakavanzika chekuva nehukama hurefu, kufunga nezvezera rake uye nyika inorarama? Kunyange zvazvo mhinduro yake yaive yakajeka, yakasvika sement yakakwana iyo inogona kubata zvidhina zveukama nekusingaperi:
'Ini ndichakuudza maitiro atinoita: kunzwisisa, kuremekedza uye kunyanya kuzvimiririra kukuru.'
Achibvumirana nemashoko ake, Xisca, mubvunzurudzo neThe Telegraph mu2011, akati:
“Anoda nzvimbo yake kana achikwikwidza, uye pfungwa yekuti ndinogara ndakamirira pane zvaanoda zuva rose inondinetesa. Zvinogona kundikanganisa. Uye zvino anofanira kunge achishushikana nezvangu… Kwete. Kana ndikamutevera kwese kwese, ndinofunga pane njodzi yatinogona kurega kuwirirana. ”
Rafael Nadal Hupenyu Hwemhuri:
Rafael Nadal akaberekerwa mumhuri ine rudo yakarongeka yemitambo. Gara shure apo isu tine mashoko echokwadi nezvemhuri yemhuri yake.
Baba: Baba vaRafael Nadal, Sebastián Nadal muzvinabhizimusi akabudirira uye muridzi wemakambani maviri. Kutanga ikambani yeinishuwarenzi, iye zvakare ane girazi uye hwindo kambani, Vidres Mallorca, pamwe neresitorendi, Sa Punta.
Muna 2009, zvakashumwa kuti akaparadzaniswa nemudzimai wake. Mugore iroro, Nadal akarasikirwa neFrance yakavhurwa uye kufungidzira kwakazara sekunge kupatsanurwa kunobata basa rake.
Achiri kutaura nezvechiitiko chacho, Nadal akanyora,
"Ndivo vaive vashandi vehupenyu hwangu uye iyo shongwe yaiva yakanyangarika. Ndakanga ndaora mwoyo, ndakanga ndisingafariri. Ndakanga ndarasikirwa nerudo rweupenyu hwose ".
Vaviri vacho, zvisinei, vakadzoka pamwe chete mu2011.
Amai: Amai vaRafael, Ana María Parera amai vemba pamwe neMutungamiriri weRafa Nadal Foundation. Akagara achitsigira kwete kwete chete basa remwanakomana wavo asi dzidzo yake futi.
Hanzvadzi sikana: María Isabel ndiye hanzvadzi yechidiki yezvino tennis tennis kwete. 1. Anemakore mashanu ari muduku kuna Rafael uye anonziwo Maribel. Akanga achitsigira zvikuru Nadal mubasa rake sezvo achigara achionekwa achienda kumitambo yake. Pahukama hwake nehanzvadzi yake, akambonyora,
"Nguva dzose anondikurudzira kuti ndiuye kana achibuda neshamwari dzake. Zvakasikwa kwatiri, kunyange kana dzimwe nguva dzimwe nguva dzingazviona zvisingazikamwi, uye chikamu chechakavanzika chehukama hwedu hunokosha. "
"Mambo wevhu" ane vanamunini vaisanganisira Miguel Ángel Nadal (akafananidzirwa pasi apa), uyo ari muchengeti wepamutambo wepamberi, akanga aine ma clubs akaita saRCD Mallorca, FC Barcelona, ​​pamwe neSpain national team.
Rafael, baba vababa vake, Toni Nadal, (inoratidzwa pasi apa) ndiye mutambi wekare mutambo. Akaziva tarenda yakajeka muRafael ndokumuudza kumutambo we tennis paaiva nemakore matatu chete uye akaramba ari mudzidzisi wake kusvikira 2018.
Rafael Nadal Untold Biography Chokwadi - Kukwikwidzana naRoger Federer:
Anotaura pamusoro pekukakavadzana pakati pevadzidzi vose vane tennis vanove vatonga tennis kwemakore anenge makumi maviri vave vari muchirongwa chevanhu kwenguva yakati ikozvino. Vose vari vaviri vane hutungamiri hwepamusoro muAtP Rankings uye ivo vakawandawo vanoonekwa sevadzidzi vaviri vakanyanya kupfuura nguva dzose.
Ivo vese vane makumi matatu nemasere Grand slam mazita pakati pavo, asi Nadal agara achikunda musoro-ku-musoro rekodhi 38-23 kunyangwe aine matatu mashoma maMajors. Iyo 15 Shanghai Masters ndiyo yekupedzisira yekupedzisira apo vese vatambi vakasangana. Nadal akakunda 2017 pamisangano yavo gumi nemaviri mumadhorobha.
Kwete Tennis Chete:
Kunze kwenyika yekambani, Nadal anofarira kutamba mutambo webhola, gorofu uye poker. Rimwechete, munaEpril 2014, rakarwisana neN1 female poker player, Vanessa Selbst, panguva yemutambo we poker muMonaco. Anotsigirawo makwikwi ebhora, Real Madrid uye RCD Mallorca.
Rafael Nadal Untold Biography - Untold Chokwadi:
Nadal akambotaura kuti akanga ari agnostic.
Iye ane asteroid inonzi zita rake. The 128036 Rafaelnadal iyo nhengo yakasimba yebhanhire yakawanikwa mu2003 pa Observatorio Astronómico de Mallorca.
Anotya imbwa sezvaakazarura muZ2010 muhupenyu hwake, "Ndinokakava vavariro dzavo".
CHOKWADI CHINOGONA: Tinoonga nekuverenga Roger Federer yedu Childhood Story plus untold biography zvinyorwa. At ChildhoodBiography, isu tinoedza kururamisa uye kururamisa. Kana iwe ukaona chimwe chinhu chisingatarise zvakanaka muchinyorwa chino, ndokumbira utaure kana gamettiitei!